Iimpawu zewebhu: Uyilo kunye nokuSebenzisa iiNgcebiso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Iimpawu
Iwebhu ine-a izinto ezingapheliyo, nokuba, ngaphandle kokusebenza ngokuzimeleyo, kufuneka, ngomzuzu wokugqibela, benze konke ukusebenzisana ngokudibeneyo ngangokunokwenzeka.
Ngokusisiseko oku kwenziwa ukwenzela ukwenza iwebhu ibe yinto engqinelanayo nesebenzayo. Imalunga ne umsebenzi womntu ngamnye kodwa kwiqelaYentsebenzo enikezelwa ngumsebenzi ngamnye wento nganye, enika umsebenzi kwiwebhu nakuwo wonke umsebenzi omkhulu owenziweyo ngaphakathi kuyo yonke imizuzu.
1 Iimpawu zewebhu, zifumanise
4 Iimpawu ezithile
5 Iimpawu zewebhu zizinto ezisisiseko kwiphepha ngalinye lewebhu
Iimpawu zewebhu, zifumanise
Kubonakala ngathi uninzi lwezinto ezingena ekusebenzeni kwewebhusayithi zinxulumene ngokusondeleyo kuyilo lwewebhu, olunokuba sisizathu esibalulekileyo sazo zonke iingcali zoyilo lwewebhu okanye unomdla kule ndawo yolwazi oluza kuthi ekugqibeleni lufumane i-boom enkulu ngenxa yenkqubela phambili yetekhnoloji ethi ngaphakathi koku inike izixhobo
Ngale ndlela, zininzi izinto ezidlala indima ebalulekileyo kuyilo lwewebhu, kodwa kweli nqaku, ziya kuba yiyo ii icon zewebhu izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo ekuvezweni komxholo wamaphepha. Ngokuyintloko, siza kukhankanya ezinye iingcebiso malunga nokusetyenziswa kwayo kunye nokuyilwa kwayo, ukuze umfundi akwazi ukuyithatha le miyalelo xa ehlalutya icon yewebhu.
Iimpawu ziyaphendula kwisalathiso, kumfanekiso othile ovumela abantu ukuba nxibelelanisa le nto neprojekthi enkulu.
Injalo imeko yemifanekiso yeendaba zentlalo, eyaziwa njengeempawu zentlalo. Olu didi lweempawu lwamkelwa ngoko nangoko, ngenxa yokuba, ngokusisiseko, umbono wobukho babo kukunikezela umbutho phakathi komthengi kunye nenethiwekhi yoluntu.
Olu didi lweempawu zinomzimba othile, kuba umbono kukugcina uthotho lweepateni zemifanekiso ezikhoyo, ezigcina umsebenzisi ebambeke kangangoko kolu hlobo lwewebhusayithi. Zizimpawu ezibalaseleyo, eziyimfuneko kolu didi lwezinto zewebhu.
Uyilo lwabo luya kuxhomekeka ikakhulu kuhlobo lwenethiwekhi abanqwenela ukunxulumana nayo.
Olu hlobo lweempawu luphendula kwiindlela ezininzi esinokuthi sizifumane ngaphakathi kophando.
Ngale ndlela, uyilo lwezi luya kuxhomekeka kakhulu kuhlobo lwesihloko okanye kwimeko ekuphandwa kuyo. Kukho amaqonga abonelela ngeendlela ezahlukeneyo ze iimpawu zophando, ukwahlulahlula ngokwemeko ezinxulumene nayo, ukuvelisa ukubonakala kuqhelekile kumxholo ophathwe.
Eli klasi lee icon lenziwe ngokobuqu ngendlela eyiyo, kuthathelwa ingqalelo iimfuno kunye nomxholo okhoyo kwiqonga lewebhu apho ziboniswa khona. Akunakwenzeka ukuba uchazeIya kuxhomekeka ngokupheleleyo kwiimfuno zoyilo okanye umxhasi ophethe iphepha.
Iimpawu zewebhu zizinto ezisisiseko kwiphepha ngalinye lewebhu
Ngabo, kunokwenzeka ukucacisa ukusebenzisana okuguqukayo, phantsi kwezicwangciso ezithile, eziya kuthi zigcine abasebenzisi esandleni rhoqo ngolu hlobo lweqonga. Ngolwazi olunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo imiba eyahlukeneyo yoyilo lwe icon yewebhu.
Kuyakubaluleka ukuthathela ingqalelo iimfuno zabaxumi, ngendlela yokuba umyili akwazi ukubonelela ngemveliso eyanelisa ezi ntlobo zeemfuno, evelisa imveliso efanelekileyo yendawo yokusebenza.
Iimpawu zewebhu zizinto ezibalulekileyo kuphuhliso lwewebhusayithi Kwaye kungenxa yezi, ukuba kunokwenzeka ukunika iimpawu kwiindawo ezininzi ezityelelwe ngomlinganiselo omkhulu namhlanje, kunye nokuchaza indlela ekulula ngayo kwabanye ukwenza lo mbutho ngendlela elula neyona ikhawulezayo unxibelelwano olunye olukhawulezileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu » Iimpawu zewebhu: Uyilo kunye neeNgcebiso ngokuSebenzisa
Izixhobo ezi-6 zasimahla zoyilo lwegraphic ukukhuphela ngoJulayi